အရမျးအေးတဲ့ ဆောငျးရာသီ မန်တလေး ကြုံးဘေးက Food Box မှာ လကျရှိ အခွအေနတေဈခု…
မန်တလေးဟာ မွနျမာ့နောကျဆုံးဘုရငျဖွဈတဲ့ သီပေါမငျး နနျးစိုကျရာ မွနျမာနိုငျငံအလယျပိုငျးက မွို့တျောတဈခုဖွဈပါတယျ…မန်တလေးတောငျနဲ့ မန်တလေးကြုံးအလှက မန်တလေးကို ရောကျသူတိုငျး သှားကွညျ့ကွရတဲ့ တကယျ့သာယာလှပပွီး ဂုဏျယူစရာကောငျးတဲ့ နရောတှပေဲ ဖွဈပါတယျ မန်တလေးသူ မန်တလေးသားတှဟောလညျး သဘောကောငျးဖျောရှကွေပွီးတော့ အလှူအတနျးမှာဆိုလညျး လကျနှေးတဲ့သူတှေ မဟုတျပါဘူး ခုလညျးပဲ အရမျးကို အေးလှနျးတဲ့ ဆောငျးရာသီမှာ မရှိဆငျးရဲသူတှေ […]
သုံးကွိမျဆကျတိုကျ သံဃာသုံးသောငျးကြျော ကို ဆှမျးလောငျးလှူခဲ့တဲ့ စတေနာရှငျ ဒေါကျတာမလေး…
( Video ဖိုငျကို အောကျဆုံးမှာတှဲပွီး တငျပေးထားပါတယျ ) ပွီးခဲ့တဲ့ ဒီဇငျဘာ ၈ ရကျနကေ့ မန်တလေးမှာ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံးလို့ ဆိုရမဲ့ သံဃာ ၃ သောငျး သံဃာ့မဟာဒါနဆှမျးဆနျစိမျးလောငျးလှူပှဲကွီး ကငျြးပပွုလုပျခဲ့ပါတယျ….မွနျမာ-ထိုငျး ခဈြကွညျရေး ဆှမျးလောငျးလှူပှဲ ဖွဈပွီး မန်တလေးမွို့ ခမျြးမွသာစညျ လယောဉျကှငျးဟောငျးမှာ ပွုလုပျခဲ့တာ […]
သောကြာသားသမီးတွေ ဒီစာ​လေးကိုဆုံး​အောင်​ဖတ်​ပြီး ကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုယ်​ ဂုဏ်​ယူလိုက်​ကြရ​အောင်
“သောကြာ သားသမီးတွေရဲ့ သူမတူတဲ့ မွေးရာပါ အားသာချက်တွေနဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်” ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုရဲ့ ငါးရက်မြောက်နေ့မှာ မွေးဖွားတဲ့ သောကြာသားသမီးလေးတွေဟာ ဗီးနပ်စ်ဂြိုလ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သောကြာသားသမီးလေးတွေမှာ သူများနဲ့မတူတဲ့ အားသာချက်နဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ အများကြီးရှိကြပါတယ် …။ ဒီအားသာချက်တွေကိုသာ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချနိုင်ရင်တော့ အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာ မလွဲဧကန်ပါပဲနော် …. […]
“ဒီလို အချစ်မျိုးချစ်ခံချင်ရင် ကိုကိုတွေကိုပဲ ရွေးပါ”
‘ကိုကို’ တွေနဲ့ ချစ်မိရင် … ဒီလို အချစ်ခံရမှာပါ ကိုကိုတွေကို ချစ်မိရင် ပိုပြီး အချစ်ခံရတယ်။ ပိုပြီး ဆိုးလို့ရသလို ကလေးတစ်ယောက်လိုလည်း ချွဲလို့ရပါတယ်။ ကိုကိုတွေက ဆုံးမတတ်သလို လမ်းပြ ပေးတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မိန်းကလေး အများစုက ကိုကိုတွေကို ချစ်ကြတာများပါတယ်။ ၁။ ကိုကို […]
HIV AIDS ကွောငျ့လူမသနေိုငျတော့တဲ့ အထိ အစှမျးထကျသညျ့ဆေးကို သိပ်ပံပညာရှငျမြားတှရှေိ့.
ဆယျစုနှဈတဈခုမက သိကြှမျးခဲ့ကွတဲ့ HIV ရောဂါဖွဈရငျ ကုရာနတ်ထိဆေးမရှိဘူးလို့အားလုံး သိထားတဲ့ အသိကိုပွငျဆငျကွရတော့မယျ့ အနအေထားတဈခုကို နှဈသဈတှကေ ယူဆောငျလာပါပွီ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ မကွာခငျ ၂၀၂၁ မှာ HIV ကိုပြောကျကငျးဆေးမယျ့ ဆေးနညျးတဈခုကို ဆေးပညာသုတသေီတှကေ ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ သုတသေနပွုလုပျထားတဲ့ နောကျဆုံးအဆငျ့ရောကျရှိနပွေီလို့သိရပါတယျ။ ဒီဆေးကတော့ သုံးမြိုးဖွဈပွီးတော့ […]
ယောကျာင်္းလေးတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို တကယ် ချစ်လားမချစ်လား စမ်းသပ်နည်းများ
(၁) မျက်ခွက်ကို လက်ဝါး နဲ့ ၁၄ ချက်လောက် ဘယ် ပြန် ညာ ပြန် ဆင့်တွယ်ကြည့်ပါ။ အား ပါ ပါစေ… (တစ်ချက်ကလေးမှတောင် ဒေါသ မထွက်ဘူးဆိုရင် သေချာတယ် အဲ့ဒီ့ ယောကျာင်္းလေး အချစ်က အချစ်စစ် အချစ်မှန် ) (၂) […]
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ရစ်ပတ်နေတဲ့ကြိုးကို ဖြုတ်ပေးဖို့ငါးဖမ်းသမားတွေဆီ လာရောက်အကူအညီတောင်ခံခဲ့တဲ့ ဝေလငါး…
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ရစ်ပတ်နေတဲ့ကြိုးကို ဖြုတ်ပေးဖို့ငါးဖမ်းသမားတွေဆီ လာရောက်အကူအညီတောင်ခံခဲ့တဲ့ ဝေလငါး(ရုပ်သံ) သဘောင်္တွေရဲ့အနီးအနားသို့ လာရောက်လေ့ရှိတဲ့ ပင်လယ်ရေနေသတ္တဝါတွေထဲမှာဆိုရင် လင်းပိုင်တွေသာအများဆုံးဖြစ်ကြပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်း ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဝေလငါးကြီးတစ်ကောင်ဟာ ငါးဖမ်းသဘောင်္အနားသို့ အနီးကပ်ဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပါတယ် ။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ December 1ရက်နေ့က မလေးရှားနိုင်ငံ ၊ Bintulu မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်နှင့်မဝေးလွန်းတဲ့နေရာတစ်နေရာမှာ […]
ဒီဇငျဘာ ၉ ရကျနမှေ့၁၅ ရကျနအေ့ထိ တဈပါတျစာ အထူးဟောစာတမျး…
ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၅ ရက်နေ့အထိ တစ်ပါတ်စာ အထူးဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ သင်၏ အလုပ်အကိုင်မှာ တော်တော့ကို ကောင်းနေပါသည်။ပိုင်းဆိုင်မှု့တွေလည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။အလှူမင်္ဂလာကိစ္စတွေလည်း ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ကောင်းပါသည်။ပစည်းဥစ္စာတွေလည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကရာထူတိုးတက်ပါမည်။ အလုပ်တွင် နံမည်ကောင်းတွေလည်း ရရှိလာပါလိမ့်မည်။ သင့်အတွက် ပျော်စရာအကောင်းဆုံး အချိန်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ယခုအပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက အလွန်ကောင်းပါသည်။အကျိုးမြတ်များစွား ရရှိပါလိမ့်မည်။ ငွေကြေးကံမှာ […]